Metro Computer Myanmar Co., Ltd
ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိသော Metro Computer Myanmar သည် Japan နိုင်ငံရှိ Metro Group ၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်လိုက်သော ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Japan နိုင်ငံရှိ Metro Group သည် ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သည့် ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှစတင်၍ စာအုပ်ဆိုင်ကြီးများ ၊ System Development Software Package များရောင်းချမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး Japan နိုင်ငံရှိ Nagasaki မြို့တွင်လည်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကောလိပ် ကိုဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသောခေတ်နှင့်အညီ Metro Group သည် ပြည်ပရုံးခွဲများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း နှင့် ပြည်ပ IT ပညာရှင်များအား အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း စသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ ၂၀၁၄ စက်တင်ဘာလတွင် Metro Computer Myanmar ကို အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ကုမ္ပဏီသည် Software Development နှင့် Web Design ကဲ့သို့သော IT ဝန်ဆောင်မှုများ သာမက Japan နှင့် Myanmar နှစ်နိုင်ငံလုံးတွင် တက်ကြွစွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသော IT ပညာရှင်များအား Development Technology နှင့် ဂျပန်စာ သင်ကြားပေးကာ အတူတကွ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Metro Group သည် Japan နှင့် Myanmar နှစ်နိုင်ငံကြားတွင် ပေါင်းကူးတံတားသဖွယ်ရှိနေပြီး Myanmar နိုင်ငံ၏တိုးတက်မှုများတွင် တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ပါဝင်နိုင်ရန် အမြဲ စိတ်အားထက်သန်လျှက်ရှိပါသည်။
Metro IT & Japanese Language Centre
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လက်ရှိ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော ဝန်ဆောင်မှုများ ( Metro Computer Service Co., Ltd )
Merchandise management system - MetroLink
MetroLink သည် cloud service ဖြစ်ပြီး စာအုပ် ၊ စာရေးကိရိယာပစ္စည်းများ စသည့်ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်များကိုစီမံခန့် ခွဲနိုင်ပါသည်။
Complex POS system
စာအုပ်များ ၊ မဂ္ဂဇင်များး ၊ စာရေးကိရိယာပစ္စည်းများ စသည့် အမျိုးမျိုးသော ကုန်ပစ္စည်း၏ စာရင်းများကိုထိန်းချုပ်ခန့် ခွဲနိုင်ပါသည်။
Nagasaki မြို့ တွင် Data Center များထားရှိထားပြီးလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Call center agent service
မိမိကုမ္ပဏီအတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက် များကို ပြန်ဖြေကြားပေးမည့် Call center agent service များလုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။
5-10-2018 Site Renewed and Updated
Home ကုမ္ပဏီအကြောင်း အလုပ်ခေါ်ခြင်း ဆက်သွယ်ရန် Metro IT & Japanese Language Centre Metro Comuputer Service
Room No(A,B,C,D),3rd Floor,Kyaw Business Tower Condo,Pansodan Street,Kyauktada Tsp,Yangon.
Home ကုမ္ပဏီအကြောင်း အလုပ်ခေါ်ခြင်း ဆက်သွယ်ရန်
Room No(A,B,C,D),3rd Floor,Kyaw Business Tower Condo,Pansodan Street,Kyauktada Tsp,Yangon,Myanmar.
Copyright ©2018 Metro Computer Myanmar All Rights Reserved.